Arenti dia manambara an'i Visiotech ho mpizara azy isam-paritra
avy amin'i Arenti Smart tamin'ny 19/05/21
Hangzhou - 19 Mey 2021 - Arenti, mpamatsy fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano IoT malaza, androany dia nanambara ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Visiotech ho mpizara ho an'ny Red Dot Design 2021 ary iF Design 2021 no nanolotra Arenti Smart Home Security Cameras. Ny mari-piaraha-miasa vaovao dia ny ...
avy amin'i Arenti Smart tamin'ny 13/04/21
Hoofddorp, 13 aprily 2021 - Mpandresy tamin'ny iF DESIGN AWARD i Arenti, loka famolavolana malaza eran-tany. Ilay vokatra nandresy, Arenti Optics Smart Home Security Series, dia nandresy tamin'ny fifehezana ny vokatra, tamin'ny sokajy fakan-tsary sy lakolosy fiambenana. Isan-taona, ny ...
avy amin'i Arenti Smart tamin'ny 22/03/21
Hangzhou - 9 martsa 2021 - Arenti, mpanolotra fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano IoT malaza, androany dia nanambara fa manamafy ny fisiany any Mongolia izy miaraka amin'ny mpiara-miasa Topica LLC vaovao ho mpizara ho an'ny seha-pamokarana andiany iray manontolo. Th ...
Hangzhou - 24 Desambra 2021 - Arenti, mpamatsy fakantsary fakana sary an-tsaina indrindra momba ny fiarovana an-trano IoT, dia nanambara androany fa hanangana ny fisiany any Maraoka miaraka amin'i Eleczar ho mpizara ho an'ny sokajy vokatra andian-dahatsoratra rehetra. Ireo mpiara-miombon’antoka vaovao ...
Arenti manendry ny fitantanana ITM ho mpaninjara eo an-toerana ao Vietnam
avy amin'i Arenti Smart tamin'ny 20/03/21
Hangzhou - 1 Janoary 2021 - Arenti, mpamatsy fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano IoT malaza, dia nanambara androany fa manamafy ny fisiany any Vietnam miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka ITM Management vaovao ho mpizara ho an'ny seha-pamokarana andiany iray manontolo. ...